သင့်ရဲ့ PC ကိုမှဘလူးတုသ်ကို INSTALL လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
ဘလူးတုသ် - ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တွင်ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်၏ဤနည်းလမ်းကို signal ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖန်တီးသောအတားအဆီးပေါ် မူတည်. 9-10 မီတာအကွာအဝေးမှာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဘလူးတုသ် 5.0 သတ်မှတ်ချက်များ throughput နှင့် range တိုးတက်ပြီ။
Windows တွင်ဘလူးတုသ် Installing
အဆိုပါ PC နဲ့ပျေါလာနိုငျသောအခက်အခဲများမှ Bluetooth ကို-Adapter ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အခြေခံနည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားပါ။ သငျသညျပြီးသား built-in ကြလျှင်ဘလူးတုသ် module ကို, သင်မူကားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုအတူအတွေ့အကြုံကိုကဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုမသိသောကြောင့်နည်းလမ်းများ2မှာထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် -4။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏ Windows 8 ကို laptop တစ်လုံးပေါ်တွင် Bluetooth ကိုဖွင့်ပေးခြင်း
Method ကို 1: ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ခြင်း
ဘလူးတုသ်-Adapter ကနှစ်ခုမျိုးကွဲတည်ရှိ: အပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းရေး။ သူတို့ရဲ့ခြားနားချက်က connection interface ကိုတည်ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပုံမှန်အစည်းအဝေးကို USB flash drive ကိုအဖြစ်ကို USB port ကိုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်နေသည်။
မားသားဘုတ်ပေါ်တွင် PCI slot ကတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်အဖြစ်ဒုတိယ, စနစ်ယူနစ်၏ disassembly လိုအပ်သည်။
သင်၏ desktop ပေါ်မှာ install လုပ်ထားပြီးတာနဲ့အသစ်တခု device ကိုသင်တို့အားပြောပြပုံပေါ်ပါတယ်။ ဆိုလျှင်, disk ထဲကကားမောင်းသူ Install, ဒါမှမဟုတ် mode ကို4၏နည်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပါ။
နည်းလမ်း 2: "န့်သတ်ချက်များ» Windows ကို
ယင်းမော်ကျူး၏အောင်မြင်သောတပ်ဆင်ပြီးနောက် Windows တွင်ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုပင်၎င်း၏မြန်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအရှိဆုံးအတွေ့အကြုံသုံးစွဲသူများအဘို့အအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Start" တွင် "Taskbar" နှင့်ကို select "Options ကို".
အပိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Devices" ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
tab ကို «ဘလူးတုသ်» နှင့်လက်ျာဖို့ slider ကိုသက်ဝင်စေ။ သင်အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ချက်များစိတ်ဝင်စားလျှင်, select လုပ်ပါ "အခြား Settings များဘလူးတုသ်».
Read more: မှာ Windows 10 ရက်နေ့တွင်ဘလူးတုသ် function ကိုဖွင့်မည်
Method ကို 3: BIOS ကို
ယခင်နည်းလမ်းတချို့အကြောင်းပြချက်မလာဘဲနေလျှင်, သင် BIOS ကိုအပေါ် Bluetooth ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းလမ်းကိုအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုသင့်လျော်သည်။
အဆိုပါ PC ကို၏ပစ်လွှတ်စဉ်အတွင်း, BIOS ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ key ကိုဖိကိုင်ထားပါ။ ဒီ key ဟာ Motherboard ကထုတ်လုပ်သူများ၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တင် screen ပေါ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "onboard Device ကို Configuration"Menu ထဲမှာ "onboard ဘလူးတုသ်" နှင့်များ၏အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပစ် "မသန်စွမ်း" အပေါ် "Enabled".
လူအပေါင်းတို့သည်ထိန်းသိမ်းရေးပုံမှန်အား Installer ကိုနဲ့ boot ကိုကယ်တင်ပြီးနောက်။
အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင် BIOS ကိုအတွက်မသွားနိုင်လျှင်အောက်ပါဆောင်းပါးကိုကိုအသုံးပြုပါ။
Read more: အဘယ်ကြောင့်ပါဘူးမ BIOS ကို
Method ကို 4: ယာဉ်မောင်း Installing
ယခင်ကဖော်ပြထားခြေလှမ်းများလုပ်နေတာပြီးနောက်, သင်လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်ပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ထိုပြဿနာကိုဘလူးတုသ်-enabled devices များ၏ယာဉ်မောင်းတည်ရှိသည်။
ကီးဘုတ် shortcut ကိုသုံးပါ ဦးဝင်း + R ကို အဖွင့်လိုင်းများအတွက် "Run ကို"။ အသစ်က window ထဲတွင်ရိုက်ထည့်ပါdevmgmt.msc။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ", ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်ဟာ "Device Manager".
devices များစာရင်းထဲက, select လုပ်ပါ «ဘလူးတုသ်».
ဌာနခွဲအတွက်အလိုရှိသောကိရိယာပေါ်တွင်ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲကိုအပ်ဒိတ်လုပ် ... ".
Windows ကိုသငျသညျ updated driver ကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ကို Select လုပ်ပါ "အော်တိုရှာရန်".
အားလုံးပြုသောအမှုကိုင်တွယ်ကားမောင်းသူရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားပြီးနောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ OS ကိုအောင်မြင်စွာဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်လျှင်, installation ကိုလိုက်နာပါ။ ရလဒ်အဖြစ်ပြတင်းပေါက်စစ်ဆင်ရေး၏အောင်မြင်သောရလဒ်အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာနှင့်အတူဖွင့်လှစ်။
ယာဉ်မောင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက: Windows7ကိုများအတွက်ဘလူးတုသ်-Adapter ကိုယာဉ်မောင်းကို Download လုပ်နှင့် install
ကျနော်တို့ကအပေါ်ကိုဖွင့်, ကွန်ပျူတာအခြေခံ Bluetooth ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများဖုံးအုပ်လျက်, ဖြစ်နိုင်သမျှအခက်အခဲများနှင့်၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းများ။